Gabar Soomaali ah oo Xijaabkeeda Awgii Looga Eryey Iskuul Ku Yaalla London - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Gabar Soomaali ah oo Xijaabkeeda Awgii Looga Eryey Iskuul Ku Yaalla London
January 13, 2021 at 05:58 Gabar Soomaali ah oo Xijaabkeeda Awgii Looga Eryey Iskuul Ku Yaalla London2021-01-13T05:58:29+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
LONDON(HALBEEG)-Maamulka Iskuulka Uxbridge High School ee galbeedka magaalada London ayaa gabadh kamid ah ardyda wax ka barata ugu gooddiyay in uu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono haddii aanay wax beddelin lebbiska ay iskuulka ku dhigato.
Sihaam Xaamud oo 12 jir ah oo la sheegay in ay ka soo jeeddo Soomaaliya ayuu maamulka dugsiga ka soo eryay fasalkii waxbarashada iyada oo lagu amray in ay soo qaadato goonno gaaban oo ay beddesho midda dheer ee ay hadda wadato.
gabadhan ayaa sheegtay in lebbiskeedu yahay mid la jaanqaadayo diinteeda oo aanay beddeleynin, waalidiinta dhalay Sihaam ayaa haatan maxkamad looga yeedhay iyada oo wax laga weydiin doono sababta ay Sihaam uga maqantahay iskuulka cudur-daar la’aan.
Ardayadda da’da yar ayaa sheegtay in marar badan ay la kulmi jirtay cagajugleyn ku aaddan diinteeda iyo labbiskeeda. Saddex todobaad oo la soo dhaafay ayay sheegtay in iskuulka laga soo ceydhinayay iyada oo lagu amrayay in ay soo beddesho goonnada dheer hase yeeshee ay haatan go’aansatay in aanay aadin dugsiga.
Sanado badan ayay sheegtay in iskuulka ay ku dhiganaysay goonnada dheer ee asturka u ah jirkeeda hase yeeshee ay aad uga naxday markii ay maamulku ku wargeliyeen in ay beddesho goonnada dheer oo ay qaadato mid gaaban.
Aabbaha dhalay Sihaam oo lagu magacaabo Idris Xaamud ayaa sheegay in goonnooyinka gaagaab ee uu iskuulku dalbanayo yihiin kuwo ka hor imanaya diinta qoyska ay Sihaam ka dhalatay sidaasina ay gabadhiisu uga biyo diidday amarka maamulka dugsiga.
« Beesha Caalamka oo Dalbatay in la Xalliyo Khilaafka Doorashada
Booliiska Somaliland oo shakhsiyaad u xiray Qarax ka dhacay Laascaanood »